Mirrors Nepal » सहपाठीको नजरमा कस्ता छन् ‘तानाशाही’ किम जोङ उन ?
१३ माघ २०७४ |
सहपाठीको नजरमा कस्ता छन् ‘तानाशाही’ किम जोङ उन ?
१३ माघ २०७४, शनिबार ०१:२१
किम यसअघि पनि एउटा महँगो निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्थे । तर, शिक्षाका लागि हजारौँ डलर खर्च हुँदा पनि उनले सन्तोषजनक प्रगति हासिल गरेका थिएनन् । किम स्विटजरल्यान्डको महँगो विद्यालय इन्टरनेसनल स्कुल अफ बर्नमा अध्ययन गर्थे । त्यहाँको वार्षिक फी १६ हजार युरो थियो । तर, फी अति महँगो भन्दै उनका बुवाले १५ वर्षे छोरालाई सो विद्यालयबाट निकालेर सन् १९९८ मा नजिकैको सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरे ।
कक्षामा किम जोङ उन पोर्चुगलका कूटनीतिज्ञका छोरा जोआओ मिसेलो सँगै बस्थे । छोटो समयमा नै उनीहरूबीच गहिरो मित्रता गाँसिएको थियो । हाल बर्नस्थित एउटा रेस्टुरेन्टमा सेफको रूपमा काम गर्ने मिसेलो भन्छन्, ‘हामी कक्षामा त्यस्तो लुसो विद्यार्थी थिएनौँ, न त असामान्य चलाख नै थियौँ । कक्षामा मध्यम तहका थियौँ ।’ तानाशाह किम कुनै वेलाको असल साथी भएको उनी बताउँछन् । मिसेलो भन्छन्, ‘हामी रमाइलो गथ्र्यौँ । ऊ असल व्यक्ति थियो । धेरै साथीहरूले उनलाई मन पराउँथे । तर आजभोलि खासै थाहा छैन ।’